I-Hashtags Service Nensizakalo Yokusebenzisa Iphrofayili
Thenga abalandeli be-Instagram ngokuzenzakalelayo
Thenga i-Facebook Abalandeli
Thenga ukuthandwa kwekhasi le-Facebook
Indlela Ehlakaniphile Kakhulu Yokuthola Abalandeli Namahhala we-Instagram!
I-TurboMedia.io yisisombululo sakho esilula futhi esisebenzayo sokuthola ngokushesha abalandeli be-Instagram abathanda kakhulu nokuthanda! Okukhethwa kukho okukhululekile futhi okukhokhelwayo kuyatholakala ukuze kuhambisane nezidingo zakho zokukhula ngabanye.
Thola Abalandeli Abakhulu bama-Instagram kanye nokuthandwa
Ukuthola Abalandeli Namahhala Wama-Instagram Kulula!
Landela Iziqondiso Ezilula
Kwenziwe ku-30 kumasekhondi angu-60!
Kungani usebenzisa iTurboMedia.io?
I-TurboMedia.io inikeza inethiwekhi entsha evumela ukuthi wena uthole ngokushesha futhi kalula Abalandeli abangu-10 bamahhala be-Instagram futhi I-10 Instagram Iyathandwa mahhala njalo amahora angu-48! Amacebo akhokhelwayo atholakalayo, kodwa izinhlelo zamahhala zisasebenza kakhulu ekukhuleni iphrofayela yakho. Ayikho iphasiwedi edingekayo, ukugcina imininingwane yakho yephrofayela ye-Instagram iphephile futhi iphephile.
I-TurboMedia.io yaklanyelwe ukuba ibe lula njengokungathi kunabantu! Isikhathi sakho sibalulekile futhi siyaqonda lokho. Ukwamukela abalandeli nabangenayo mahhala, mane nje uqedele ucwaningo noma izenzo zezenhlalo ze-5 ku-30 kuya kumasekhondi angu-60 futhi usuqedile! Uzosheshe uthole insizakalo oyenzile futhi ungaphinda inqubo njalo amahora we-48.
Uma usebenze uhlelo lokukhulula noma olukhokhelwayo, uzobona abalandeli bakho kanye nokuthanda kwakho kuqala ukukhula ngokushesha. Yenza ngokuzenzakalelayo uhlelo lokukhulula njalo kumahora we-48 noma usebenze uhlelo lwe-100% olukhokha ngokuzenzekelayo. Yenza uhlelo olukhokhelwe futhi uthole ngokuzenzakalelayo abalandeli ngesonto lonke nokuthandayo kuzo zonke izikhala ezintsha ozenza ngemva kwemizuzu!
Izinketho zamahhala nezakhokhelwayo
Abalandeli abangu-15 ($ 20.00) Abalandeli abangu-30 ($ 40.00) Abalandeli abangu-60 ($ 80.00)
Thola Abalandeli abangu-15 Ngosuku
Ikhulula Njalo emahoreni angama-48
Usebenzisa i-1x Njalo emahoreni ayi-48
Ukuthandwa kwe-25 ($ 20) Ukuthandwa kwe-50 ($ 40) Ukuthandwa kwe-100 ($ 80) Ukuthandwa kwe-200 ($ 160) Ukuthandwa kwe-500 ($ 350) Ukuthandwa kwe-1000 ($ 700)
Zitholele Ukuthandwa okungu-25 ngePosi ngalinye
Thola Abalandeli Abamahhala be-Instagram: Funda ukuthi yini ongakunikeza yona
NgoJanuwari 2020, i-Instagram ibike cishe isigidi sabasebenzisi benyanga. Woza ngoJanuwari 2021, lelo nani lizokhuphuka ngamanothi ambalwa futhi lokhu kwanda okusheshayo kwabasebenzisi be-Instagram kuzobonisa kuphela ukuthi ipulatifomu ifike kude kangakanani. Namuhla, i-Instagram ingumshini omkhulu wokwenza imali wamabhizinisi nabathonya bezokuxhumana, yingakho kungaphezulu kwenkundla yezokuxhumana. Ngakolunye uhlangothi, empeleni ngumsebenzi wabaningi. Ama-brand anethonya elikhulu nabathonya bemidiya yezenhlalo benza izigidi ngeposi ngalinye, ngakho-ke kungani kufanele ushiye ngemuva? Ngaphambi kokuba uqale ukwenza imali yangempela kusuka ku-Instagram, kufanele usebenze kanzima ukuhlakulela isithombe sakho endaweni yesikhulumi. Kunezici ezimbalwa ezilawula ukuthi wenza imali esheshayo futhi engakanani nge-Instagram. Lokhu kufaka phakathi ukuthi ungubani, amanani omkhiqizo wakho omele lokho, okufanele ukunikele ngakho, nokuthi bangaki abantu abakuthembayo futhi abaphendukele kuwe ukuthola izixazululo. Ukusungula ubunikazi bomkhiqizo wakho nokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo kanye / noma izinsizakalo kungumthwalo wakho omkhulu. Kepha, kunezindlela zokwandisa ngokushesha inani labalandeli bakho. Izinketho zokuthola abalandeli be-Instagram mahhala nezinye izindlela ezikhokhelwayo zingakunika onqenqemeni ngaphezu kwabancintisana nabo. Lokhu ikakhulukazi maqondana nokufinyelela kulabo obhekiswe kubo nokwenza isithombe esihlala njalo. Kulokhu okuthunyelwe, sizobhekisisa ukuthi ukuba nabalandeli abaningi be-Insta kungakusebenzela kanjani izimangaliso. Ngakho-ke, ngaphandle kokuchitha isikhathi, ake singene kuwo!
Izinzuzo zokuba nabalandeli abaningi ku-Instagram
Ku-Instagram, umzamo uyindlela nemali ukuphela. Kodwa-ke, uzofika lapho unabalandeli abaningi be-Instagram. Nazi ezinye izinzuzo ezimangalisayo ozoqala ukuzibona uma isibalo sabalandeli bakho silokhu sikhuphuka ngokungaguquguquki.
Abanye abathatha umkhiqizo wakho: Okuzokunikeza ngeke kudale umsindo omningi ngaphandle kokuthi kufinyelele kubantu abaningi phakathi kwezithameli zakho ozihlosile. Njengoba unabalandeli abaningi, uzoba nochungechunge olungaguquki, olukhulayo lwabantu abangeke babelane ngokuqukethwe kwakho kuphela kodwa bathenge nemikhiqizo yakho. Ezinye zezindawo ezinenzuzo kakhulu ze-Instagram zifaka ukuvakasha nezokuvakasha, ubuhle, impilo nokuqina, imfashini, ukukhulisa izingane, indlela yokuphila, ibhizinisi, ukudla, ukuthwebula izithombe, nomculo.Thatha u-Jane Selter njengesibonelo. Ngabalandeli be-Instagram abangaphezu kwezigidi eziyi-12, imodeli yokuqina ibe yisibalo esidumile ku-Instagram sokukhuthaza ukuvivinya umzimba, impilo, kanye nokuphila kahle. UJane uyisibonelo esiphelele somuntu oshiseka ngokuthile (esimweni sakhe, ukuqina). Usebenzisa nesikhathi sakhe ukuze abelane ngakho nabantu abanomqondo ofanayo emhlabeni jikelele. Kunzima ukucabanga ukuthi enye yamamodeli wokuqina we-Instagram yake yaxhashazwa ngokusekelwe ekubukekeni kwayo. Namuhla, u-Selter uhola kahle ezinhlelweni zakhe zokuqina ezikhokhelwayo kanye nange-Instagram, lapho eqhubeka enezela kubalandeli bakhe usuku ngalunye.
Ungabonakala ekhasini Lokuhlola le-Insta: Uma uzenzela igama ku-niche yakho futhi ube nokulandela okuhle ngokwanele, okuthunyelwe kwakho kungase kuvele ekhasini elithi Hlola le-Instagram. Sisebenzisa igama elithi 'decent-kwanele' ngoba awukho umthetho oqinile wokuthi bangaki abalandeli okufanele ube nabo ukuze bafakwe ku-Instagram Explore. Ikhasi le-Instagram elithi Hlola lalungiswa kabusha ngoMeyi 2019 futhi manje, selifaka ibha yokuzula evumela abasebenzisi ukuthi bakhethe uhlobo lokuqukethwe abafuna ukukubuka. Izinketho zihlanganisa i-IGTV, okuyinkundla ye-Insta ngokwayo yokubuka amavidiyo efomu elide (amavidiyo anomzuzu owodwa-plus), kanye Thenga - inkundla yezitolo ye-Instagram.Eceleni kwe-IGTV ne-Shop, abasebenzisi bangaphinda bakhethe iziteshi zezihloko ukuze babuke okuqukethwe ama-niches abathanda kuwo. Isibonelo, uma i-akhawunti yakho ye-Instagram imayelana nokudla, ungafakwa ekhasini elithi Hlola lomsebenzisi ofuna okuqukethwe okuhlobene nokudla. Ukufakwa ku-Instagram Explore kungenza isiteshi sakho sixhunywe nabasebenzisi okungenzeka abakaze bazi ngisho nokuthi ukhona nokuthi yini okufanele unikeze yona.I-Instagram manje ivumela imikhiqizo ukuthi ithenge izikhangiso ku-Explore. Nakuba izikhangiso ezithengiwe zingaboniswa kokuphakelayo kwe-Explore ngokwayo, zingathuthukisa amathuba okuthi umkhiqizo wakho utholwe.
Khulisa ithrafikhi yewebhusayithi: Uma umkhiqizo wakho usebenza ikakhulukazi kuwebhusayithi yayo esemthethweni, uzodinga ukusebenzisa i-Instagram njengenkundla yokumaketha iwebhusayithi yakho. Uzothola amabhulogi amaningi nezindatshana ku-inthanethi ezincoma ukuthatha izinyathelo ezimbalwa ezilula. Lokhu kufaka phakathi ukungeza isixhumanisi kuwebhusayithi yebhizinisi lakho ku-Instagram bio yakho nakuzo zonke izithombe namavidiyo akho athunyelwe. Kodwa-ke, ngaphandle uma unabalandeli abenele, awukwazi ukulindela ukuthi i-Instagram ibe yinkundla yokuxhumanisa iwebhusayithi yakho nababukeli obahlosile. ukubhalisela insiza ekuvumela ukuthi uthole abalandeli be-Instagram bamahhala. Njengoba inani labalandeli bakho likhuphuka, kanjalo nenani labavakashela iwebhusayithi esemthethweni yomkhiqizo wakho. Nakuba ukwanda kwethrafikhi yewebhusayithi akusona isiqinisekiso sokuthi abantu bazothenga okuthengisayo, kuzonikeza iwebhusayithi yakho ukubonakala okudingeka kakhulu. Uma wenza imizamo eyanele yokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ithuthukiswa injini yokusesha ngokufaka amagama angukhiye alungile kuyo yonke indawo, imiphumela ehlanganisiwe ingaba mihle. Izinga lenjini yokusesha yewebhusayithi yakho lizothuthuka, kwenze umkhiqizo wakho ubonakale kakhudlwana hhayi ku-Instagram kuphela, kodwa nasezinkundleni ezifana ne-Google, Yahoo, kanye ne-Bing.
Thola ukunakwa okwengeziwe ku-YouTube: I-YouTube iyinkundla yezokuxhumana esekelwe kumavidiyo enkulu kunazo zonke emhlabeni futhi uma ungumuntu onesifiso sokusebenzisa i-YouTube, ngeke nje wenze into yakho ku-YouTube. Gcina iphrofayili ye-Instagram futhi futhi ukhumbule ukuyisebenzisa ngenkuthalo. Njengoba ubungenza kuwebhusayithi, namathisela isixhumanisi sesiteshi sakho se-YouTube ku-Insta bio yakho futhi uqhubeke ubuyekeza isixhumanisi sevidiyo yakho ye-YouTube esanda kuthunyelwa. Phakathi kwabalandeli bakho abahlanganisiwe nababhalisile kuyo yonke i-YouTube ne-Instagram, bangase babe baningi yethulwe kuwe ku-Instagram. Kubandakanya imininingwane yamavidiyo akho e-YouTube nesiteshi ku-Instagram bio yakho kuzokhuthaza abalandeli abakhona be-Instagram ukuthi badlulele esiteshini sakho se-YouTube. Uma bethanda abakubonayo, uzoba nababhalisile abaningi kanye nokubukwa ku-YouTube, okungakhuphula kakhulu amathuba akho okuba umsebenzisi we-YouTube wesikhathi esigcwele. Uma ungakwazi ukukhuthala kuzo zombili izinkundla, kungaletha imivuzo eyengeziwe. Cabanga uzuza isamba semali esinempilo kokubili ku-YouTube naku-Instagram. Kuzwakala kumema, akunjalo?
Hlanganyela namanye amabhrendi futhi uvune imivuzo: Uma uqala ukubonakala ku-Instagram, amanye amabhrendi nabadali bokuqukethwe abasebenza ku-niche yakho bangafuna ukuhlanganyela nawe. Kulezi zinsuku, kumayelana nokusebenzisana futhi kuncane ngokuncintisana ezinkundleni zokuxhumana, futhi kuyasebenza. Kusiza ngani ukubeka omunye umuntu phansi lapho amabhizinisi/abantu ababili bengasebenza ndawonye futhi baphakele izimpumelelo nempumelelo yomunye nomunye? Sibona ama-travel vlogger esebenzisana namanye ama-travel vlogger, kanye nabaculi, namaciko abambisana. Akungabazeki ukuthi i-Instagram ivule iminyango eminingi yamathuba. Kufanele uphakamise owakho umdlalo futhi ugxile ekukhipheni okuqukethwe okudonsa ukunaka kwezithameli zakho. Uma usunenani elifanelekile labalandeli, ungaya kwamanye amabhrendi ukuze uthole ukusebenzisana. Nakuba zonke izicelo zakho zokusebenzisana zingeke zamukelwe, ezinye zizodlula futhi uma zikhishwa kahle, zingaphushela inani labalandeli bakho. Uma ufinyelela izinga 'lomgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana', ungalindela izicelo zokusebenzisana ezivela kwamanye amabhrendi nabadali bokuqukethwe, futhi umjikelezo uzoqhubeka. Njengomgqugquzeli, uzoba namandla okuhlanganyela nemikhiqizo evela kwezinye izindawo ezinikezela ngemikhiqizo ziyahambisana niche yakho. Isibonelo, uma ungumculi futhi ukwazi ukuzuza isimo 'somgqugquzeli' ku-Instagram, ungaya kumabhrendi akhiqiza futhi athengise imikhiqizo oyidlalayo. Umdlali wesiginci angasebenzisana nesiginci kanye/noma umkhiqizi we-amplifier, umculi angahlanganyela nenkampani ekhiqiza imakrofoni, njalo njalo.
Izici ze-Instagram zokwazisa umkhiqizo wakho
Lapho ikhasi lakho le-Instagram seliqala ukuqashelwa futhi uthola abalandeli abaningi, ungasebenzisa ngokunenzuzo izici ezihlukile zokukhangisa ze-Instagram ukuthola abalandeli abaningi be-Instagram. Ngenkathi ukusebenzisa zonke lezi zici akuphoqelekile, zizwe ukhululekile ukuxuba nokufanisa. Ngale ndlela, ungawasebenzisa kakhulu amathuluzi akhelwe ngaphakathi e-Insta ukukhulisa ukufinyelela komkhiqizo wakho. Ngaphandle kwezici ezivamile zokwabelana ngezithombe, i-Instagram iyaziqhenya ngalezi zici zokumaketha ezilandelayo.
Sike saxoxa nge-IGTV phambilini, kepha leyo kwakuyipulatifomu yevidiyo eyinde isikhathi eside. Uhlelo lokusebenza oluzenzakalelayo lwe-Instagram luvumela kuphela okuthunyelwe kwamavidiyo amafomu amafushane. Ngaphandle kwesici esivamile sokulayisha ividiyo sefomu elifushane, ezinye izici ezimbili zamavidiyo ezinikezwa yipulatifomu zifaka amavidiyo abukhoma nezindaba. Isici sevidiyo ebukhoma sivumela ama-brand ukwakha ubuqiniso bomkhiqizo kanye nokwenza izinto obala - izinto eziba yigugu ngokwengeziwe ngosuku ngalunye oludlulayo. Lokhu kungenxa yokuncintisana okwenyuka njalo kuma-niches. Kuyindlela enhle yokuthi abalandeli bakho basebenzisane nawe ngesikhathi sangempela futhi. Njalo lapho uqala ukusakaza ividiyo ebukhoma, abalandeli bakho bayaziswa. Ipulatifomu isanda kuthuthukisa amandla ayo wevidiyo ebukhoma futhi manje, abasebenzisi ababili bangafaka kuvidiyo ebukhoma kusuka kumadivayisi amabili ahlukene. Kusukela ezingxoxweni ezibukhoma kuya kokwethulwa komkhiqizo bukhoma kuya ekusebenzisaneni kwesikhathi sangempela, amathuba awapheli. Uma i-algorithm ye-Instagram ikuthanda, ividiyo yakho ebukhoma ingaze ifike kumavidiyo we- “Top Live” ekhasini le-Instagram Explore. Uma iyenza, ividiyo yakho ingabukwa abasebenzisi be-Insta emhlabeni wonke, ithuthukise kakhulu amathuba okwanda kwesibalo sabalandeli. Kukhona nesici 'Sezindaba' esivumela ukubukwa kwesithombe semizuzwana engu-10 nokubukwa kwevidiyo kwemizuzwana engu-15. Isici esihle esisetshenziswe kakhulu yimikhiqizo nabashukumisayo ukuvuselela abalandeli babo maqondana nemikhiqizo yabo yakamuva, izinsizakalo, kanye / noma okuqukethwe okuthunyelwe. I-Instagram inike amandla ukumakwa komkhiqizo ngaphakathi kwesici 'Sezindaba' futhi, okusho ukuthi uma ukhombisa umkhiqizo owuthengisayo kwenye 'Yezindaba' zakho, ungawumaka. Abalandeli abanesifiso sokuyithenga bangachofoza kumaki womkhiqizo bese bewuthenga kusuka kuwebhusayithi yakho.
Ngaphandle kokwabelana ngezithombe namavidiyo, ungathumela futhi izikhangiso ukukhuthaza lokho onikela ngakho ku-Instagram. Kunezilungiselelo ezahlukahlukene ongazama ngazo ukuthola uhlobo olufanele lwezikhangiso ongazisebenzisela umkhiqizo wakho. Ungasebenzisa nokuqukethwe okukhona ekhasini lakho bese ukuguqula kube yizikhangiso ezinesici Sezikhangiso ze-Instagram. Ukwakha nokuphatha izikhangiso ku-Instagram, kufanele usebenzise i-Ad Manager ye-Facebook njengoba i-Instagram uhlelo lokusebenza oluphethwe yi-Facebook.
Abasebenzisi be-Instagram banganika amandla izaziso zokuphusha, ezizobazisa lapho amakhasi abalandelayo befaka izithombe ezintsha, amavidiyo, njll. Ukuze usebenzise lesi sici, kufanele ukhuthaze abalandeli bakho abakhona ukuthi bathathe isinyathelo. Kukho konke okuthunyelwe kwakho, faka ukubizelwa esenzweni, utshele abalandeli bakho ukuthi banike amandla izaziso zohlelo lokusebenza lwesiteshi sakho. Ngenkathi bonke abalandeli bakho bengaziphenduli izingcingo zakho, abanye bazophendula. Uma bethanda okuthumele, bazokwabelana ngakho nabangane babo nabalandeli. Izaziso zohlelo lokusebenza kungenzeka zingabi ukubheja kwakho okuhle kakhulu ngokuthola ukubonakala okuningi ku-Instagram, kepha kungasiza kakhulu. Isiphetho Ngakho-ke, manje uyazi ukuthi abalandeli be-Instagram bangakuzuzisa kanjani wena nezinye izici zokukhangisa ezinamandla kakhulu ze-Insta. Okulandelayo, kufanele unqume ukuthi ufuna ukwenza kanjani ngokuthola abalandeli abaningi. Yebo, ngazo zonke izindlela, ungathatha indlela ephilayo ulinde abantu ukuthi bahlanganyele nokuqukethwe kwakho ngaphambi kokushaya inkinobho ethi 'Landela'. Noma kunjalo, kuthatha isikhathi futhi uma ufuna ukukala ukuphakama kwempumelelo ye-Instagram, ungahle ube ngcono ekukhetheni enye indlela. Ngokubhalisela izinhlelo ezandisa ngokushesha ukubonakala kwe-Instagram, ungathola abalandeli be-Instagram mahhala nokuthandwa ngokushesha. Izinhlelo zikhokhele izinhlobo ezinikezwayo futhi. Ngenkathi abakhokhelwayo bezokulethela imiphumela ngokushesha okukhulu, ungafinyelela okuningi ngokusebenzisa nezinguqulo zamahhala. Ingxenye enhle kakhulu ngalezi zinhlelo ukuthi awekho ama-bots abandakanyekile. Ngakho-ke, bonke abalandeli abasha obatholayo bangabasebenzisi bangempela be-Instagram. Ngakho-ke kungani ungabhaliseli uhlelo olunjalo bese uvumela umkhiqizo wakho ube nomthelela omkhulu kunakuqala ku-inthanethi?
Ukuziqhenya Ukukhonza i-500,000 + Abasebenzisi be-Instagram
Bheka ukubuyekezwa komsebenzisi weTurboMedia nolwazi lwabo
I-TurboMedia ithumele ikhasi lethu le-Instagram ngokushesha kunanoma ubani!
Banikeza izinsizakalo zekhwalithi eziphezulu kunethiwekhi.
Ngisebenzise i-TurboMedia iminyaka engu-2 futhi ngithole ukukhula okungaphezulu kunakhokhelwa! Ngiyabonga abafana.
I-12th Meyi 2022
Ukusebenzisa Amavidiyo we-TikTok wezindaba ze-Instagram & Reels: Ukwenziwa Kanjani
I-TikTok ithathwa kabanzi njengenye yezinhlelo zokusebenza zevidiyo ezimfishane ezidume kakhulu emhlabeni namuhla. Uhlelo lokusebenza lokwabelana ngevidiyo kubikwa ukuthi lusetshenziswa...
I-3rd May 2022
Kungani Ukunquma Uhlu Lwakho “Olulandelayo” Kukusiza Ukuheha Abalandeli Abaningi?
Noma ngabe kuzwakala kungenangqondo, ungathola abalandeli abaningi be-Instagram ngokungalandeli ku-Instagram labo ongasaxhumani nabo. Ngokusebenzisana, senza...
21st Ngo-Ephreli 2022
Izihlungi Zezithombe Ezinhle Kakhulu Ongazisebenzisa Ekumaketheni Kwakho kwe-Instagram ngo-2022
I-Instagram ayiselona uhlelo lokusebenza lokwabelana ngezithombe olulula olwake lwaba yilo. Ukuduma kwayo okukhulu emhlabeni jikelele kuyenze yaba iqhawe elingenakuqhathaniswa...
Ulungele umphumela wegciwane?
I-TurboMedia iyisixazululo se-Social Media Marketing Solution yebhizinisi nama-Instagram account. Siza amaklayenti ethu athole abalandeli abaningi, ukuthandwa, ukubukwa kanye namazwana ukwandisa umthelela wabo ku-intanethi.
I-copyright © 2022 TurboMedia (turbomedia.io). Wonke Amalungelo Agodliwe. Ibalazwe
Ungayisebenzisa Kanjani I-Instagram Ukusekela Izizathu Zomphakathi
Ukuthi Ukuba I-Influencer Ehlobene Kungakusiza Kanjani Ukukhulisa I-akhawunti Yakho Ye-Instagram
I-copyright © 2020 TurboMedia (turbomedia.io).
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu kuwebhusayithi yethu